Pads phezu izingono asetshenziswa ezimweni ezithile, kuthiye ibele, futhi izinkinga ezingavela esusela umama futhi ingane. Ngokuvamile lezi zinkinga kungaba izinkinga ibele ukuze umama osemncane azilahle ke esivuna Izingxube. Futhi ngeze, ngoba iyiphi wezingane uzokutshela ukuthi Iningi lezingane ezitholwa ukudla ziwusizo ikakhulu ezinyangeni zokuqala zokuphila kuyinto ubisi lukamama. Futhi ngenkathi asikho isidingo kufanele ubekezelele ubuhlungu nokuhlukunyezwa, ngoba iyiphi esitolo komama ukuthenga abicah pads for amabele ukuba lula inqubo yokudla.
Ngokuvamile, lezi amadivaysi asetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
Imifantu ingono, okuyinto ngokuvamile kwenzeka ngo-omama ongenalwazi. Ngenxa yalokho lokunamathelisa abampofu futhi abancela kwi webele singase sibonakale aqhephukile, ekuletheni eziningi ngokuphazamiseka. Ukuze ugweme le nkinga, kahle ngokubeka umntwana ibele. Ingane kumele ukugwinya hhayi kuphela ingono, kodwa areola, isifuba akufanele ukuletha ubuhlungu noma kabi. Uma bengabaza kungcono bonana nodokotela wakho mayelana okunamathiselwe ezinhle. Ngaphezu kwalokho, lapho imifantu kakade Ukurhemisa ukuvikela ingono ebeleni ukulimala unomphela, angasetshenziswa kuze kube ukuphulukisa.
Ifulethi noma izingono nabokhulumile. Esifubeni Umumo okungajwayelekile ziphazamise okunamathiselwe kanye yokudla. Ungasebenzisa Ababumbi noma usebenzisa i pads phezu izingono, ozokusiza ingane isifuba ngendlela efanele.
Esikolweni kuya ibhodlela. Kaningi kukhona isimo lapho ezinsukwini zokuqala zokuphila ingane uphoqelekile ukuba adle ebhodleleni. Lokhu kwenzeka uma umphumela ukulethwa nzima umama waphoqeleka ukuba ahlale ngaphandle ingane noma ngemva Ukubeletha, lapho lactation iyaqala kamuva kuqhathaniswa nokubeletha zemvelo. Sucking ebhodleleni kudinga umzamo ingane kakhulu esingaphansi ukusuthisa ngokuqondile webele, ngakho izingane ngokuvamile abafuni ukuhambisa kusuka ukunikeza yokufakelwa ukuba ibele. Kulesi simo, abanye omama ngisho kufanele ukondla ingane ibhodlela uzwakalise ubisi lwebele ezinyangeni ezimbalwa. Prakthiza ebonisa ukuthi, usebenzisa abicah pads phezu izingono, kamama kungenza lula ukudlulisa kusuka ibhodlela ebeleni, okuyinto ngokungangabazeki kuyoba usizo kakhulu futhi kulula kokubili.
Kwaqubuka amazinyo. namazinyo Okokuqala e izingane zingase zibonakale kudala njengoba 3-4 izinyanga, futhi nabo ngokuvamile inkinga nge ibele: ingane bengase bakulume kokubili ngamabomu futhi ngengozi. Vikela ebeleni likanina kusukela kulolu hlobo ukulimala nakho kungasiza ukunciphisa phezu izingono. Yakhiwa abicah nomzimba omncane, kodwa ingane akunakwenzeka ukuba bakwazi ukuluma ngokusebenzisa. Sebenzisa ukunqwabelanisa lingafika okwamanje lapho ingane iyeke ukuluma, noma unina enquma ukuyeka ibele.
Khumbula ukuthi ibele kahle ohlelekile kufanele ulethe umama nengane kuphela imizwelo eyakhayo, futhi pads kuyozisiza ukuba ngixhumane uma izinkinga, ngoba iningi yohlobo lwazo ungagxambukeli ethintekayo kanye contact olfactory kukamama kanye nengane yakhe.
Uhlikihla kwabesifazane abakhulelwe - inzuzo noma umonakalo?